The Line: iri itsva Apple podcast iyo ichave iine yayo akateedzana pakupera kwegore | Ndinobva mac
Isu tanga tichitaura kwekanguva nezve Apple foray kupinda podcasting nekugadzira zvepakutanga zvemukati. Muna Chivabvu wegore rapfuura, runyerekupe irworwo rwakatanga kuunganidza hutsi, zvichiratidza kuti Apple yakanga iri kugadzirira kutarisisa mukugadzira yayo podcasts.
Apple epakutanga podcast vaitarisirwa kuti vatarise pa kusimudzira zvirimo kuApple TV + Uye zvinobudirira zvave zvakadaro. Pakutanga gore rino, pamberi pekutanga kwemwaka wechipiri wenyaya yeFor All Humanity nhepfenyuro, Apple yakaburitsa podcast nezve akateedzana.
Iyi haisi yega yega, kubva maawa mashoma apfuura, Apple yakaburitsa podcast nyowani, yakanzi The Line yazvo zvikamu zviviri zvekutanga zvatovepo. Vhiki rega rega, Apple inotanga kuratidzira chiitiko chitsva chevatanhatu vari chikamu cheiyi podcast.
Kunyange iyo For All Humanity podcast yakavakirwa pane zvakateedzana izvo zvave kuwanikwa, The Line podcast, inoitirwa yakanangana ne inotevera zvinyorwa zvakateedzana izvo Apple ichaburitsa gare gare gore rino, chinyorwa chakateedzana chakaumbwa nezvikamu zvina.
Apple inotsanangura iyi podcast nyowani se:
Muna 2018, boka remaNavy SEALs rakatyora mabara ndokupomera mukuru wavo, Eddie Gallagher, nehumhondi, achivakwevera vese kumatare makuru ehondo kutongwa kwechizvarwa ichi. Ko Navy SEAL yakayambuka here muIraq? Dan Taberski anokuendesa mukati mekamuri iyo kekutanga, kudhirowa keteni rekuti America iri kurwa sei hondo dzayo nhasi nekuzarura nyaya iyo vezvenhau vakafukidza kutongwa vakapotsa. Kubudikidza nehurukuro dzepedyo nevanopfuura makumi mashanu vanoshanda, iwo akateedzana anotsvaga kuti akadzikamisa sei mutsetse pakati pezvakanaka nezvakaipa wave muhondo dzisingaperi, uye chii chiri kuita kumoyo nepfungwa dzeavo vatinotumira.kurwira mavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » The Line: iri itsva Apple podcast iyo ichave iine yayo akateedzana mukupera kwegore